Waftiga dawladda Puntland ee ku sugan Galkacyo oo kulan la yeeshay madaxda hay?adaha samafalka. [Akhris …] – Radio Daljir
Waftiga dawladda Puntland ee ku sugan Galkacyo oo kulan la yeeshay madaxda hay?adaha samafalka. [Akhris …]
Luulyo 21, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, July 21 – Waftigii dawladda Puntland ee muddooyinkaan ku sugnaa magaalada Galkacyo ayaa maanta kulan aad u ballaaran ka qaaday hay?adaha UN iyo samafalka ah ‘NGO-da’ caalamiga ah ee gobolka ka hawlgala.
Kulankaan oo ahaa mid xanbaarsanaa xamaasad gaar ah ayaa waxaa ka qeyb galayey waftigii dawladda oo ah mid iskugu jira labada gole ee xakuumadda iyo baarlamaan, kaasi oo uu horkacayo guddoomiyaha golaha wakiillada Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, iyo dhammaan madaxda hay?adaha ka howlga gobolka Mudug, waxaana ugu muhiimsanaa waxyaabihii diiradda lagu saarayey sidii xog looga heli lahaa waxqabad hay?adaha ka shaqeeya.
Waxaana ka mid ahaa hay?adihii kulankaasi ka qeyb galay, UNOCHA, UNHCR, UNICEF, DRC, NRC, ISLAMIC RELIEF, RELIEF INTRANIONAL, PDRC, iyo kuwo kale oo ay kulanka uga qeyb galayeen wakiillo ay soo dirsadeen, waxaana madaxda hay?aduhu ay halkasi ka sheegeen waxqabadkooda iyo doorka ay ku leeyihiin nabad-galyada iyo hormarinta arrimaha bulashada.
Maxamed C/rixmaan (Dhaban-cad) oo ku hadlayey magaca hay?adda UNOCHA, oo ah hay?adda UN-ka u qaabansan xagga warbxinnada ayaa ku dheeraaday waxqabadkii ay ka hirgaliyeen deegaanada ka tirsan gobolka Mudug, isagoo carabka ku adkeeyey waxqabadkooda ugu badan in ay ku ekeeyeen dhinaca dadka Barakacayaasha ah, kuwaasi oo sida uu sheegay ay u sameeyeen daryeel fara badan oo xagga deegaanka, iyo quudintaba iskugu jira.
Waxaana sidoo kale uu intaasi ku daray Mr Dhaban-cad, hadda in ay gacanta ku hayaan shaqooyin wax ku ool ah oo lagu daryeelayo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulashada gobolka, waxaana uu si gaar ah u xusay in ay dadka ka taakulayn doonaan xagga caafimaadka iyo arrimo kale oo muhiim u ah bulashada gobolka.
Dhinaca dawladdana guddoomiyaha golaha wakiillada Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, ayaa warbixintaasi hay?adaha kadib waxaa uu sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan tallaabo kasta oo ay qaadeen hay?aduhu ayna u arkaan waxqabad loo fuliyey bulshada, waxaase dhanka kale uu tilmaamay in ay jiraan waxbadan oo wali dhimman loogana fadhiyey hay?aduhu in ay hirgaliyaan.
Guddoomiyuhu waxaa kale oo uu xusay ujeedada socdaalkooda oo uu madaxda hay?adaha u sheegay in ay ugu weytahay wax ka badalka arrimaha nabad-galayada iyo la tacaalidda deegaanada hadda ay abaaruhu ka jiraan ee ka mid ah gobolka Mudug, waxaana uu hay?adaha u soo jeediyey in ay gacan buuran ka geystaan sidii dadka abaaraysan loo taageeri lahaa.
Wasiirka wasaaradda caafimaada ee Puntland Dr Bashiir Cali Biixi, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hay?adaha ku dhaliilay in ay ka gaabiyeen shaqooyinkii loo xilsaaray ee ahaa muujinta waxqabad la taaban karo xagga hormarinta deegyada bulashada ah, waxaana uu intaasi sii raaciyey hay?aduhu in ay dawladda u soo gudbiyaan waxqabadkoodii sanadki tagay ee 2008 iyo midka sanadkaan aynu ku guda jira ee 2009.
Qaar ka mid ah mas?uuliyiin dawladda e labada gole oo ka mid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa si gaar ah u tilmaamay hay?aduhu in ay faraha ka laabteen dayactirka iyo dib u habaynta goobaha dawladda sida maxkamada, Saldhigyada cidanka, qeybaha booliska, Jeelasha, iyo meelaha kale ee daruuriga u ah dawladda iyo adeegga caadiga ah ee dadweynaha.
Gaba-gabdii shirkaasi ayaa la iska meel dhigay in maamulka iyo hay?aduhu ay yeeshaan xiriir ka xoog badan midka hadda ay wada leeyihiin, iyadoo lagu ballamay labo maalmood gudahood dawladda in lagu soo gudbiyo qoraalo rasmi ah oo muujinaya waxbadkii sanadkii la soo dhaafay midkaan, iyo sidoo kale habka ay isku kaashan karaan labada dhinac.
Xoghayaha gaashaandhiga ee Xisb al Islam oo aan ka waraysanay khasaaraha dagaaladii ka dhacay Muqdisho. [Dhegaysi …]